Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shaqaalaha duulista ee Cebu Pacific ayaa hadda 100% si buuxda u tallaalay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Filibiin News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Shaqaalaha duulista ee Cebu Pacific ayaa hadda 100% la tallaalay.
CEB waxay u dabaaldageysaa guushan sidii loo qorsheeyay, iyo waqtiga la filayo kororka rakaabka bilaha soo socda, ka dib markii la fududeeyay xayiraadaha safarka ee Filibiin.
Barnaamijka Ilaalinta COVID waa qayb ka mid ah hindisaha Kooxda Gokongwei ee dhammaan qaybaheeda ganacsi.
Guud ahaan shaqaalaha Cebu Pacific ayaa hadda 98 boqolkiiba si buuxda loo tallaalay.
Cebu Pacific waxay ka gaadhay qiimaynta badbaadada 7-xiddig ee airlineratings.com u hogaansanaanteeda COVID-19.
Diyaaradda Filibiin ee ugu weyn, Cebu pacific, waxay gaadhay 100% heerka tallaalka shaqaalaheeda duulista ee firfircoon iyada oo loo marayo barnaamijkeeda tallaalka ee shaqaalaha, COVID Protect, iyo iskaashiga kala duwan ee LGU-yada dalka.
"Aad baan ugu faraxsanahay inaan qof walba la wadaagno warkan anagoo isku diyaarinayna inaan sare u qaadno shabakadeena gudaha si aan u daboolno baahida safarka ee la joojiyay. Cebu pacific waxa ay sii wadaysaa in ay kor u qaaddo hab-maamuuska badbaadada waxaana ognahay in shaqaalaha si buuxda u talaalan ay xoojin doonto kalsoonida iyo kalsoonida dadweynaha ee safarka hawada, "ayuu yidhi Felix Lopez, gudoomiye ku xigeenka waaxda dadka Cebu pacific.
Barnaamijka ilaalinta COVID waa qayb ka mid ah Kooxda GokongweiHindisaha dhammaan qaybaha ganacsiga. Taas oo loo marayo, shaqaalaha CEB waxay heleen talaal bilaash ah naftooda iyo kuwa ku tiirsan, iyo sidoo kale shaqaalaha dhinac saddexaad, sida wakiilada hubinta iyo kuwa gacanta ku haya boorsooyinka.
Marka laga reebo barnaamijkan ay hogaaminayso ururka, CEB waxa kale oo ay si gacan-gacan ah ula shaqeysay qaybaha kala duwan ee dawladda hoose bilihii la soo dhaafay si ay u hubiso in shaqaalaheeda lagu tallaali doono tallaal kasta oo la heli karo, wakhtiga ugu horreeya ee suurtogalka ah.
"Waxaan ku ammaaneynaa duuliyayaashayada iyo shaqaalaheenna sida ay si iskood ah u tallaaleen, ma ahan oo keliya inay difaacaan naftooda iyo qoysaskooda, laakiin xitaa rakaabka ay la socdaan. Waxaan sidoo kale u mahadcelineynaa madaxdeena goobta Kooxda Gokongwei Hormuudka barnaamijka tallaalka, iyo dabcan, wada-hawlgalayaasha dawladda si aan u aqoonsanno waaxda gaadiidka sida kooxda mudnaanta leh, "ayuu yiri Capt. Sam Avila, Madaxweyne Ku-Xigeenka Hawlaha Duulimaadka ee Cebu Pacific.
Guud ahaan shaqaalaha Cebu Pacific ayaa hadda 98% si buuxda loo tallaalay. Iyada oo ah shuraakada diyaaradeed ee ugu horreysa ee hindisaha Ingat-Angat, iyo taageere weyn oo ku aaddan dhismaha qaranka, CEB waxa ay si firfircoon tallaallada uga soo qaadaysay dibadda una geysay Filibiin, iyo dalka oo dhan tan iyo bishii Maarso ee sanadkan. Ilaa hadda, shirkaddu waxay si badbaado leh hawada uga qaadday 16.5 milyan oo qiyaas tallaal ah Shiinaha una dirtay Filibiin, iyo ku dhawaad ​​​​25 milyan oo qiyaasood oo tallaal ah 28 dal oo gudaha ah.
CEB waxay ku guulaysatay qiimaynta badbaadada 7-xiddig ee airlineratings.com u hogaansanaanteeda COVID-19. Waxay sii waddaa hirgelinta habab dhowr lakab ah oo badqabka ah iyadoo ku dadaalaysa inay soo celiso kalsoonida shacabka ee safarka hawada.
CEB waxay ka shaqeysaa shabakadda gudaha ee ugu ballaaran Filibiin oo daboolaysa 32 goobood, oo ka sarreeya siddeeddeeda (8) goobood ee caalamiga ah. Doonteeda 73-ka xoog leh, mid ka mid ah kuwa ugu da'da yar adduunka, waxaa ku jira laba (2) xamuul ATR u go'ay iyo hal (1) A330 xamuul ah.